အခြားရောဂါများ Archives - Page 10 of 35 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
krill oil ကိုဘယ်သူတွေသောက်သင့်လဲ
krill oil ကိုဘယ်သူတွေသောက်သင့်လဲ ပုစွန်ဆိတ်လေးဘယ်လိုငယ် ပင်လယ်ကူးတတ်တယ် ဆိုသော စကားလေးကို လူတိုင်းကြားဖူးကြပါမယ် အဲလို ပုဆိတ်ငယ်ငယ်လေး လိုအကောင်လေးတွေ ဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအတွက်အကျိုးများသော ဓါတ်တမျိုးပါဝင်နေပြန်တယ်။ လူတိုင်း ငါးကြီးဆီကို ကြားဖူးကြပါတယ် krill oilဟာ ငါးကြီးဆီ လိုပဲ…
ဗီတာမင် B1,B6 နှင့် B12 တို့၏ ကောင်းကျိုးများ
ဗီတာမင် B1,B6 နှင့် B12 တို့၏ ကောင်းကျိုးများ ဒီနေ့မှာတော့ အကြောအားဆေး၊အကြောပြေဆေး၊အာရုံကြောအားဆေးဆိုပြီး နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ခေတ်စားနေတဲ့ ဗီတာမင်B1,B6 နဲ့ B12 တို့ရဲ့ ကောင်းကျိုးများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ဗီတာမင် B1 ရဲ့ကောင်းကျိုးများ ဗီတာမင် B1ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့- ၁။ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကောင်းမွန်စေခြင်း။…
ဆယ်ကျော်သက်နှင့်သံဓါတ်၏အရေးပါပုံ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ တကယ့်ကိုတက်သစ်စ၊စိတ်ရောခန္ဓာပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆုံးအရွယ်။ အဲ့ဒီအရွယ်မှာ လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေမ ရရင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးနည်းပါးမှာ အမှန်။ ဒီလိုဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေအများကြီးထဲကမှ သတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သံဓါတ်ရဲ့အရေးပါပုံအကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ သံဓါတ်က လူတွေအတွက်ဘယ်လိုအရေးပါတာလဲ??? ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ်တွေရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရကိုသယ်ဆောင်ပေးလို့ လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အာဟာရဓါတ်ပါ၊၊ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်၊ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တွေမှာလဲ သံဓါတ်ကအရေးပါပါတယ်။…
သံဓာတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ?
?သံဓာတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ? ‘သွေး’ ဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်တဲ့ အရာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးပမာဏ ငါးလီတာ ဝန်းကျင်အထိပြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတင်မကပဲ သွေးရဲ့ အရည်အသွေးလည်း ပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်။ သွေးနီဥ သွေးဖြူဥ သွေးဥမွှားတွေရဲ့ အရေအတွက်တွေဟာ ရှိသင့်တဲ့…
အာရုံကြောအားနည်းနေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ▪လူတစ်ယောက်ကို စက်တစ်လုံးလို မြင်ကြည့်မယ်ဆို အာရုံကြောတွေကိုလည်း လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးတွေ.. အင်တာနက်ဖိုင်ဘာကြိုးတွေလိုပဲလို့ တင်စားလို့ရပါတယ်။ ▪လူတစ်ယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့၊ အပူ၊နာကျင်မှု၊ တုန်ခါမှု စတဲ့ အာရုံခံမှု အာရုံသိမှုတွေကစလို့ နှလုံးခုန်နှုန်း..သွေးပေါင်ချိန်မှန်ကန်ဖို့.. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့အထိကို ဒီအာရုံကြောတွေကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ…
အာရုံကြော အားဆေးဆိုတာ ဘာလဲ
အာရုံကြော အားဆေးဆိုတာ ဘာလဲ ယနေ့ ကမ္ဘာ တဝန်းမှာ အားဆေးအမျိုးမျိုးဟာ တွင်ကျယ်လျက်ရှိပါတယ် အားဆေးအမျိုးမျိုး အဖုံအဖုံရှိသည်အနက် အားဆေးအများစုနဲ့ ပတ်သတ်သော သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လါမှုတွေ စမ်းသပ်မှုတွေ ဘယ်လိုအကျိုးရှိတာလဲ စတာ တွေ ကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားဆေးဆိုတာ…
ထိခိုက်ရှနာများ ကိုအမာရွတ်မထင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ထိခိုက်ရှနာများ ကိုအမာရွတ်မထင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လူတိုင်း ဟာ နေ့စဉ်မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာ ချော်လဲတာ တွေ နဲ့ ကြုံတွေ့တတ်ကြပါတယ် အဲလို ထိခိုက်မိပြီ ဆိုပါက အမာရွတ် ပါးပါးလေး ကျန်ခဲ့သူ တွေက ရုပ်ဆိုး ပန်းဆိုးမဖြစ်ပေမယ့် အမာရွတ်ထူထူကြီး ကျန်ခဲ့မယ်…
သင် ဘာကြောင့်သံဓါတ်လိုအပ်သလဲ ?
သင် ဘာကြောင့်သံဓါတ်လိုအပ်သလဲ ? သံဓာတ်အားဆေးကို ပုံမှန်သော်လည်းကောင်း ရံဖန်ရံခါသော်လည်းကောင်း သောက်နေကြသူတွေအများအပြားရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ကလည်း တီဗီမှာကြေငြာတာတွေ့လို့ အားဆေးဆိုတာနဲ့ဝယ်သောက်လိုက်တယ်…တစ်ချို့ကျအသိမိတ်ဆွေကညွှန်းလို့သောက်တယ်….တစ်ချို့က ဆရာဝန်က သောက်ခိုင်းတယ်လို့သောက်တယ်။သောက်မယ့်သာသောက်နေတာ….ဒီသံဓာတ်အားဆေးဆိုတာ ဘာအတွက်ကောင်းလဲ …ဘယ်သူတွေသောက်သင့်တယ်…ဘာကြောင့်သောက်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေသေချာချာသိသူတော့ ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့် သံဓာတ်အကြောင်းလေး အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးလိုပါတယ်။ သံဓာတ်ဆိုတာ ယောကျ်ား မိန်းမ မရွေး…လူတိုင်းရဲ့…
မျိုးရိုးလိုက်နိုင်သော နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာ တစ်ခုခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဒေါသထွက်စရာကြုံတွေ့ရသော လူကြီးများ ရင်ဘက်ကိုဖိကာ လဲကျသွားတာ မြင်ဖူးကြမှာပါ heart attack လို့ လူအများသိကြပေမယ့် ဆေးပညာအခေါ်က တော့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာကြောင့်ပါ အဲလို နှလုံးသွေးကြောပိတ်သူတွေ ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက်မျိုးရိုးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကို…
လူငယ်တို့ အတွက် ဗီတာမင်စီ
လူငယ်တို့ အတွက် ဗီတာမင်စီ ငယ်ရွယ်သူတိုင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ကျန်းမာဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအား မြင့်မားဖို့ အတွက် နေ့စဉ် ဗီတာမင်နှင့် သတ္ထုဓါတ်များစွာလိုအပ်ပါတယ် အဲလို အရေးကြီးသော ဗီတာမင်တွေကို နေ့စဉ် အစားအစာများမှရသော်လည်း အခြေအနေ တချို့မှာ ဗီတာမင်အားဆေး တွေ ဖြည့်တင်းပေးဖို့…